Ukuconsa Ukumaketha Ingxenye 1: Ngubani Okhathalelayo?
NgoLwesithathu, Agasti 18, 2010 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Yebo, ngihlela ukubhala izitolimende zesikhathi esizayo kulolu chungechunge lwezikhala zokukhangisa ngamadriphu. Kepha, noma ngingenalo, qagela ukuthi yini: isihloko sisasebenza. Ingxenye yokuqala yomkhankaso wokukhangisa ngamaconsi awunqumi ukuthi ubhale ini. Akukhethi igama lesizinda noma ukuklama ikhasi lokufika. Akusethi amafomu wakho wokuxhumana nokwenza umkhankaso usebenze ngokuzenzakalela. Ingxenye 1 yanoma yimuphi umkhankaso we-drip ucabanga ukuthi ngubani onendaba nokuthi kufanele uthini.
Ukunquma ukuthi obani abakhathalelayo kungashiwo ngokufaneleke kakhudlwana: ubani ofuna ukumkhathalela. Uyizwa ekukhangiseni, ekuxhumaneni nabantu, nakubaqeqeshi bezebhizinisi yonke indawo - thola i-niche yakho. Lokhu kubaluleke kakhulu ekumakethweni kwedriphu ngoba ngaphambi kokuthi udonsele udinga ukuhola; futhi ukuthola lokho kuhola udinga ukunikela ngento eyigugu; futhi wazi kanjani ukuthi yini enenani uze wazi ukuthi ubani othengayo?
Kunjalo, “ukuthenga.” Bhekana nakho, noma ngabe awubaceli ukuthi bavule incwadi yabo ephaketheni, ucela abantu ukuthi bathenge okuthile kuwe - mhlawumbe okunye okuqukethwe okuthuthukisile ukuze kuzuze bona. Manje, abazithengi ngemali. Imali ethenga ulwazi kubakhangisi abanobuhlakani akuyona amadola namasenti. Uhlobo lwemali lwazi lokuxhumana… kanti nezinga lokwehla kwamandla emali liphezulu kakhulu.
Ithini lesoda elalisetshenziselwa ukuthola i-nickel, akunjalo? Kuliqiniso, nekheli le-imeyili elivumelekile ebelisetshenziselwa ukufaka incwadi yezivakashi (khumbula lezo). Akusenjalo. Wonke amathemba okuphequlula iwebhu aphatha incwadi ephaketheni egcwele ikheli labo le-imeyili, izinombolo zocingo, kanye nabantu. Labo abafuna leyo datha yokuxhumana ngaphandle kokunikeza noma yini yenani eliyigugu njengembuyiselo bafana nabampofu bokumaketha kwe-inthanethi, bacela imali kuphela ngomusa walowo onikelayo. Esikhundleni sokuncenga, yenza isivumelwano esifanele. Nikeza okuthile okuyigugu njenge amathiphu wamahhala avela kubalobi abahlonishwayo, a i-whitepaper yamahhala ye-PDF, isemina noma umcimbi wamahhala, noma intandokazi yami, i e-Yebo. Futhi, lapho ufuna ukukhokhisa kakhulu (okusho imininingwane eningiliziwe ocela ukuhola ukuthi uyihlinzeke) inani elithe xaxa okufanele ulidale. Ngaphandle kwalokho, uzozithola uthengisa i-soda ngemali engu- $ 10 ngaphandle kwabaningi.
Manje, yingxenye “kabani” yalokhu okhathalelayo eqala ukubaluleka. Uyabona, inani kulokho okunikezayo lihlobene ngqo nokuthi unikela kubani. Uma wazi ukuthi izithameli zakho zingobani, lapho-ke (futhi kuphela lapho) ungathuthukisa umkhiqizo abazimisele ukuwuthenga ngentengo yemininingwane yabo yokuxhumana. Empeleni, kufanele uchithe isikhathi esiningi wenza umkhiqizo ohlela ukuwuthengisa ngemininingwane yokuxhumana njengoba wenza umkhiqizo ohlela ukuwuthengisa ngemali. Ngemuva kwakho konke, ngaphandle kwangaphambilini kunethemba elincane lakamuva.
Ngakho-ke, uma ucabanga ukuqala umkhankaso wokudonsa, zibuze ukuthi "ngubani okhathalelayo?" Hlanganisa umnikelo ofanele lokho okucelayo ngokubuyisela – ungabi mpofu wokumaketha. Futhi, uma sebethengile, qiniseka ukuletha.
Tags: ukumaketha kokudonsa
Aug 19, 2010 ku-11: 20 AM
Ngicabanga ukuthi sithambekele ekucabangeni… kahle ngiyabakhathalela ngakho-ke nabo bazokwenza kanjalo ... Kubaluleke kakhulu ukwazi izithameli zakho nokwazi ukuthi obani abanakekelayo. Okuthunyelwe okuhle.